08/06/13 ~ Myanmar Forward
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ခရိုင် ၃ ခုတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လူထုစုရုံးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ချထား
Posted by drmyochit Tuesday, August 06, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး ဥပဒေ ISA ထုတ်ပြန်ထားသော ဒူးဆစ် ၊ ပရာနာခွန် နှင့် ပွမ်ပရာဆတ် ထရုပ်ဟိုင်း ခရိုင်တို့တွင် သြဂုတ်လ ၄ ရက်၌ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့များ၏ လူထုစုရုံးမှုများ ပြလုပ် လာနိုင်ခြင်းကြောင့် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ချထားမှုများ ပြုလုပ် ထားရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ခရိုင် ၃ ခုတွင် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် လုံခြုံရေး ရဲတပ်ခွဲ ၁၁ ခွဲကို သြဂုတ်လ ၃ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း ကတည်းက တပ်ဖြန့်ချ ထားခဲ့ပြီး လူဝင်လူထွက် စစ်ဆေးခြင်း ၊ အစိုးရ အရေးကြီး အဆောက်အအုံ များအား ကာကွယ်ခြင်း နှင့် အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လြုံခုံရေး ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ရဲတပ်ခွဲ တစ်ခွဲကိုလည်း ပဋိပက္ခ များ ဖြစ်ပေါ် လာပါက ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ၃ နာရီအတွင်း တပ်ဖြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသင့် ပြင်ဆင် ထားရှိစေကြောင်း သိရသည်။
လူထုစုရုံးမှုများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ် ထားကြမှု၏ အဓိက အကြောင်းအရင်း မှာ ဖြူထိုင်းပါတီ ၏ ဆမွတ်ပရာခန် ပြည်နယ် ပါလီမန် အမတ် ၀ိုရာချိုင်းဟီမာ အပေါ် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးရေး အဆို တင်သွင်းခဲ့မှု ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၄င်းအဆိုပြုချက် ကို ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁ ရက်တို့တွင် အောက်လွှတ်တော် ၌ ကြားနာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီမိုကရက် ပါတီက ၀ိုရာချိုင် အား လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးရေး အဆိုပြုချက် ကို ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် လူထုစုရုံးမှုများ ပြုလုပ် သွားရန် စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း နှင့် လူထုစုရုံးမှုတွင် ပြည်သူ ၄၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ ခန့်အထိ ပါဝင်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်း ထားကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ် အစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန် ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်း အနေဖြင့် ဘောလုံးလောကမှ အနားယူလိုက်ပြီးနောက် ရုပ်ရှင်လောကထဲ ဝင်ရောက်လာဖွယ် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမား ဘဝမှ အပြီးတိုင် အနားယူပြီဟု ယခုနှစ် အစောပိုင်းက ကြေညာထားသည့်နောက် အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းသည် အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ မဆုံးဖြတ်ရသေးချေ။ သို့သော်လည်း ယခုအခါ ဘက်ဟမ်းသည် သရုပ်ဆောင် လောကထဲ ခြေချမှုအဖြစ် သူလျှို ဇာတ်လမ်းတစ်ခု၌ ပါဝင်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
The Secret Service ဟု အမည်ပေးထားသော ဇာတ်ကားတွင် ဘက်ဟမ်းပါဝင်လာနိုင်ကြောင်း နီးစပ်သူများက The Sun သို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။ မက်သရူးဗော်ဂန်၏ ဇာတ်ကားသစ်တွင် ဘက်ဟမ်းသည် ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ် တစ်နေရာမှ ပါဝင်ရန် စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြောင်းလည်း ခန့်မှန်းမှုများ အားကောင်းနေသည်။ ဘက်ဟမ်းကို မင်းသား ကိုလင်ဖာ့သ်က သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်လိုစိတ် ရှိမရှိ မေးမြန်း စုံစမ်းခဲ့ပြီး ဘက်ဟမ်းကမူ မိမိအနေဖြင့် ယတိပြတ် မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဟု ပြန်ကြားခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ မိတ်ဆွေ အချို့က ပြောဆိုခဲ့သည်။
"ဘက်ဟမ်းက ရုပ်ရှင်တွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ တစ်ခန်းတစ်လေလောက် ပါဝင်ရတာမျိုးကို သဘောကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက အချိန်ပြည့် နှစ်မြှုပ်ထားရတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အနေနဲ့တော့ မဟုတ်သေးဘူးလေ"ဟု ဘက်ဟမ်းနှင့် ရင်းနှီးသူများက The Sun သို့ ပြောကြားထားသည်။ ဗော်ဂန် အနေဖြင့် ဘက်ဟမ်းကို ယခုဇာတ်ကားတွင် အသုံးပြုခွင့်ရမည် ဆိုပါက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၏ ပုံရိပ်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပြီး ဖြစ်စေမည်ဟု ယုံကြည်နေသည်။ ယခုဇာတ်ကားတွင် ဆမ်မြူရယ်လ် အယ်လ် ဂျက်ဆင်သည် ဗီလိန် ဇာတ်ရုပ်တစ်ခုအတွက် ပါဝင်ရန် သဘောတူညီထားပြီး ဖာ့သ်အပြင် မိုက်ကယ်ကိန်းလည်း သရုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သိရှိရသည်။
ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်သည့် ကစားသမားများကို အရေးယူမည်
Posted by drmyochit Tuesday, August 06, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲစဉ်အဖြစ် နေပြည်တော်ကလပ်အသင်းနဲ့ ရန်ကုန် ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ မနေ့ညနေက ကစားရာမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ကစားသမားတွေကို အရေးယူမယ်လို့ မြန်မာနိုင် ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် က ပြောပါတယ်။ပွဲမစင်ခင်ကတည်းက ၂ ဖက် ပရိသတ်တွေအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြဿနာဟာ ပွဲကစားချိန် မိနစ် ၃၀ ကျော်မှာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကစားသမား ဒေးဗစ်ထန်းကို နေပြည်တော်ကလပ်အသင်း နောက်ခံလူတွေက ဖျက်ထုတ်တာ ကြမ်းတဲ့အတွက် ဒိုင်က ပင်နယ်တီပေးလိုက်ရာမှာ နေပြည်တော်အသင်း ပရိသတ်တဦးက ကွင်းအတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး ဒိုင်လူကြီးကို ရန်မှုခဲ့လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ ပွဲပြန်စခဲ့ပေမယ့် ၂ ဖက်ကစားသမားအကြား ရန်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ ပွဲကို ရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။ ဘောလုံးကစားသမားတွေ ရန်ဖြစ်နေစဉ်မှာ လာရောက်အားပေး တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ပွဲကြည့်စင်က ခုံတွေကို ဖျက်ဆီးတာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကစားသမားတွေ အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကို ဗွီဒီယို၊ လုံခြုံရေး ကင်မရာ အထောက်အထားတွေကို ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သလို အရေးယူသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်က ဦးစိုးမိုးက ပြောပါတယ်။
ခုံတွေရိုက်ချိုး မူးယစ်ရမ်းကားသူတွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာကနေ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်သလို ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေကို သူက ပြောပါတယ်။
“အဲဒီမှာ တချို့က အရက်တွေ တော်တော်လေး သောက်လာတဲ့ ပရိသတ်တွေရှိတယ်။ နောက် နည်းနည်းသွေးဆိုးတဲ့ ပရိသတ်တွေပေါ့နော်။ နောင်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ပရိသတ်ကို တားမြစ်တာတို့၊ အရက်သောက်လာရင် အ၀င်မခံတာတို့။ နောက်ပိုင်း ဒါသူတို့အတွက် အချက်ပေးခေါင်းလောင်းပဲ။ ဆိုတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီလို ရမ်းကားတာမျိုး နှောင့်ယှက်တာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ပိုပြီး ထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့။ သင်ခန်းစာတခုရလိုက်တာပေါ့။ ကျန်တာကတော့ ဘာမှ ကြီးကြီးမှားမှား အနှောင့်အယှက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပရိသတ် ၂၀၀၀၀ လောက်ထဲမှာ ၁၀၀၊ ၂၀၀ လောက်ဆိုးတဲ့ ပရိသတ်ပေါ့နော်/ သောက်စားလာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်အချင်းချင်း ၀ိုင်းထိန်းတာတို့၊ အမှားလုပ်တဲ့ ပရိသတ်ကလည်း နောက် သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူမှု မကြုံရအောင်လို့ သူတို့ကိုသူတို့ ဆင်ခြင်မှရမယ်။ နောက်ဆုံး လုပ်သင့်တာအနေနဲ့ ပြောရရင် အရက်သောက်စားလာတဲ့လူ၊ အရက်မူးပြီးလာတဲ့လူတွေကို ပေးမ၀င်တာမျိုး၊ ဟန့်တားတာမျိုး လုပ်သင့်တာလို့ ကျနော်တို့ အသိရလိုက်တာပေါ့။ ဒါကို ကျနော်တို့ အသိတခုရလိုက်ပေမယ့် ဒီလိုမျိုး လုပ်ဖို့ကျတော့ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှ ရမယ်။”
ဒီပွဲကို ပရိသတ် သောင်းကျော် လာရောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်းကိုတော့ အနိုင်ပေးကာ ချန်ပီယံအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သလို နေပြည်တော်အသင်းကတော့ ဒုတိယနေရာ ရသွားပါတယ်။
ဒီပွဲဖြစ်စဉ်ဟာ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် သမိုင်းမှာ အလွန်ကို အကျဉ်းတန် အရုပ်ဆိုးပြီး လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သလို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ဆီးဂိမ်း အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံဖြစ်တယ်လို့ ၀ါရင့် အားကစားကလောင်ရှင် ဦးခင်မောင်ထွေးက ပြောပါတယ်။
“သက်ရောက်မှု ရှိမရှိတော့ မသိဘူး၊ ဆီးဂိမ်းမှာ ကျနော်တို့ သတိထားရမယ်ဆိုတာတော့ ဒါက သတိပေးခေါင်းလောင်းသံပဲ။ ဆီးဂိမ်းက ဒီထက် ပြင်းထန်တာ။ အခု မြန်မာအသင်းအချင်းချင်း ကစားတာတောင် ဒီလောက်ဖြစ်နေရင် မြန်မာအသင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားအသင်း ကစားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ မသိဘူး။ သက်ဆိုင်ရာတွေက လုံခြုံရေးကို အထူး ကြပ်မတ်ဖို့ လိုတယ်။”
အားကစားကလောင်ရှင်တဦးကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ လုံခြုံရေး အားနည်းချက်တခုကြောင့် ဖြစ်သလို အရှေ့တောင်အာရှပြိုင်ပွဲမှာ လုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်သင့်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။
“မနေ့က ပွဲမျိုးကျတော့ ပရိသတ်က အရမ်းများတယ်။ လုံခြုံရေးက အရမ်းနည်းတယ်။ အရမ်းနည်းတော့ ပရိသတ်တွေက ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ သူတို့ အိမ်ရှင်အသင်း၊ အိမ်ကွင်း အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါမှာ ဆင်းလာကြတယ်။ ပရိသတ်ဆိုတာမျိုးက မျှမျှတတ အားပေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိမယ်၊ သွေးဆူတဲ့သူတွေလည်း ပါလာမယ်။ သွေးဆူတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကွင်းထဲရောက်လာတော့ လုံခြုံရေးမရှိတော့ အချိန်မီ မဟန့်တားနိုင်ဘူး။ အဲမှာ အခြေအနေတွေ ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ဆီးဂိမ်းကို ဒီပုံစံနဲ့ သွားရင်တော့ ထိခိုက်မှာပဲ။ ဒီလိုလုံခြံရေး တာဝန်ယူမှုမျိုးနဲ့ဆိုတော့ ထိခိုက်မှာပဲ။”
အရင်ကလည်း မြန်မာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းနဲ့ အိုမန်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားစဉ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခကြောင့် လျော်ကြေးပေးဆောင်ခဲ့ရသလို နိုင်ငံတကာပွဲတချို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခွင့် အပိတ်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး တရုတ်ပြည်၌ ရောင်းစားခံခဲ့ရ
Posted by drmyochit Tuesday, August 06, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေ မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ရွှေပြည်သာမြို့နယ် နေသူများဖြစ်သည့် မမာမာဦး၊ မအေးမြတ်မွန်(ခ)အငယ်လေးနှင့် မစိုးစိုး (စိစစ်ဆဲ) တို့ (၃)ဦးမှ စည်းရုံးခေါ်ဆောင်သွားပြီး လာရှိုးမြို့၊ အားကစားကွင်းအနီး၌ကြိုတင်ရောက်ရှိနေသူ သားငယ်(စိစစ်ဆဲ)နှင့် အတူ လားရှိုးမြို့၊ (၉)ရပ်ကွက်နေ မစုစုခိုင်ထွေး၏နေအိမ်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ ကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ခိုးဝင်ပြီး ရွှေလီမြို့၊ အန်ဝှေ့ရပ်ကွက်ရှိ မရှမ်းမ(စိစစ်ဆဲ)၏ နေအိမ်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း မရှမ်းမနှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့က ထိုမိန်းကလေးအား တရုတ်အမျိုးသား (၂)ဦးထံ ရောင်းစားခဲ့ကြသောကြောင့် ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်နေ့တွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှ အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ သမီးဖြစ်သူ ရောင်းစားခံရမှုကို ရွှေလီမြို့၌ သမီးဖြစ်သူနှင့် တွေ့ခဲ့သော မဇာခြည်စိမ့်စိမ့်ကျော်မှ နေအိမ်အနီးရှိဖုန်းဆိုင်သို့ ဇူလိုင်လ(၂၀)ရက်နေ့က ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သမီးဖြစ်သူအား စည်းရုံးခေါ်ဆောင်ကာ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောင်းစားခဲ့ကြသူများဖြစ်သည့် မမာမာဦး၊ မအေးမြတ်မွန်(ခ)အငယ်လေး၊ မစိုးစိုး၊ သားငယ်၊ မစုစုခိုင်ထွေး၊ မရှမ်းမနှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းတို့အား အရေးယူပေးပါရန် ဖခင်ဖြစ်သူက သဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့တွင် လှော်ကားနယ်မြေရဲစခန်းသို့
လာရောက် တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် (ပ)၂၃၅/၂၀၁၃၊ လူကုန်ကူးမှုဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ ဖြင့်အမှုဖွင့်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 06, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ကျောင်းသားတွေ... လူရမ်းကားတွေ... လက်ဖက်ရည် ဆိုင်မှာ သီချင်း အခွေ လုပြီး ထည့်ဖွင့်ခိုင်းရင်း ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ရန်ဖြစ်လဲ ရဲတွေ သွားမဆွဲပါနှင့် သွားရောက် မဖြန်ဖြေပါနှင့်...
ကျောင်းသားတွေ... လူရမ်းကားတွေ... အရက်ဆိုင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခုံလု... ခွက်လုရင်း ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ရန်ဖြစ်လဲ ရဲတွေ သွားမဆွဲပါနှင့် သွားရောက် မဖြန်ဖြေပါနှင့်...
အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်... ကျောင်းသားတွေ... လူရမ်းကားတွေ... ရန်ဖြစ်လဲ သူ့တို့ဟာ သူတို့ သတ်လို့ သေသေကျေကျေ ရဲတွေ သွားမဆွဲပါနှင့် သွားရောက် မဖြန်ဖြေပါနှင့်...
အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်... ကျောင်းသားတွေ... လူရမ်းကားတွေ... ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းတွေကို ဖျက်စီးနေလဲ သူ့တို့ဟာ သူတို့ စိစိညက်ညက် ဖြစ်အောင် ဖျက်စီးနေပါစေ... ရဲတွေ သွားမဆွဲပါနှင့် သွားရောက် မဖြန်ဖြေပါနှင့်...
သွားဆွဲလို့ သွားရောက် ဖြေရှင်းခဲ့လို့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ ကာ သေ သွားခဲ့ လျှင်... ကျေးဇူးရှင် ထောင်အကျခံ သူရဲဂေါင်းများ နှင့် အမှတ်တရ အောက်မေ့ ၀မ်းနည်း ဖွယ်အထိမ်း အမှတ် များစွာ ပေါ်လာကာ.. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ တစ်နှစ် ပတ်လုံး ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်း အမှတ်များ နှင့် ၀မ်းနည်း တသပူဆွေး ကာ မျက်ရည်တွေ ကုန်ခမ်းသွားကြမှာ စိုးလို့ပါ...
From: Thway Thit Sar
Posted by drmyochit Tuesday, August 06, 2013, under သတင်းများ |2comments
မိုးသီးဇွန် ဆီမှ အီးမေးတစောင်၊ လျှို့ဝှက်စွာ တွဲပြီးပို့ခဲ့ပါတယ်။
အီးမေးထဲမှာ “ ကျနော့ရဲ့အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အခုလိုအရေးကြီးကာလမှာ
ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့ ဋ္ဌေးနိုင်ကိုမိုးသီးသတ်သလားမသတ်ဘူးလားဆိုတာ ကို
အများက ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကျနော်သိသလောက်ရှင်းလင်းတင်ပြပါ့မယ်။
ဋ္ဌေးနိုင် ဟာ ၁၉၈၈ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ပါ။
၁၉၈၈ မှာ ကျနော် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကို တည်ထောင်တဲ့အခါ
ဋ္ဌေးနိုင်ဟာ ကျနော့ရဲ့လက်အောက်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေ ဒေသကောလိပ် (၂) ရဲ့
စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၁၉၈၈ နယ်စပ်ကိုရောက်တော့ သေဘောဘိုး စခန်းကိုရောက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ဟာ ABSDF ပထမသက်တန်း ကျနော်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ( အေဘီ ဗဟို) မှာ
ဒီလိုနဲ့ နှစ်လ သုံးလ အကြာမှာ ဋ္ဌေးနိုင်ဟာ ကျနော်နဲ့အတူနေဖို့ အေဘီ ဗဟို ကိုရောက်လာပြီး၊
ကျနော် ၊ ကိုကိုဦး၊ မိုးသီး ဦးဆောင်တဲ့ဘက်ကိုရပ်ခဲ့ပြီး မိုးသီးဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကိုဦး က အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ ကျနော် က EC ပါ။
မိုးသီး က ဋ္ဌေးနိုင်ကို ဗဟိုစစ်ရေးတာဝန်ခံပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကိုကိုဦးနဲ့ကျနော် တောင်ပိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်
ဋ္ဌေးနိုင်ကို မိုးသီး ကဖမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ နုင်ိအောင်ဘက်မှာ ကိုနေဝင်းအောင် နှင့် ကိုစိုးလင်း ( မြောက်ပိုင်း ABSDF) ကို သူလျှိုမှုနှင့်ဖမ်းဆီးပြီး မြေကျင်းမှာ
ထည့်ထားခဲ့တယ်။ ( တလအကြာမှာ ဋ္ဌေးနိုင်အဖမ်းခံရတယ်ဖြစ်ပါတယ်)။
ကျနော်နှင့် ကိုကိုဦးက မိုးသီးဆီကိုစက်ရိုက်ပြီး၊ ဘာကြောင့် ဋ္ဌေးနိုင် ကို
မိုးသီး က နိုင်အောင်တို့ဘက်မှ ကိုနေဝင်းအောင်နှင့် ကိုစိုးလင်း ကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ သူတို့က မိုးသီးဘက်ကဋ္ဌေးနိုင်ဟာ
လည်း သူတို့နဲ့အတူတူပါပဲလို့ထွက်ဆိုလို့ ဖမ်းဆီးလိုက်ရတယ် လို့ဖြေရှင်းပါတယ်။
ကျနော်က ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက် ငြင်းချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိုးသီး ဟာ ကျနော့်တောင်းဆိုချက်ကို ဂရုမစိုက်ပဲ ဖမ်းမြဲဖမ်းထားပါတယ်။
ကျနော် ကိုကိုဦး ကို မေးတော့လည်း ဋ္ဌေးနိုင်ဟာ သူလျှိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။
နောက်ပြီး နိုင်အောင့် ဘက်ကပေးတဲ့သတင်းနဲ့ဖမ်းတယ် ဆိုတာ
အခြေအမြစ်မရှိဘူး လို့ သူ့စဉ်းစားချက်ကိုပြောပြီး၊
ကိုကိုဦး ဟာ သူ့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကို အသုံးပြုပြီး မိုးသီးထံကိုကြေးနန်းရိုက်ပါတယ်။
“ မိုးသီး ငါအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတယောက်အနေနဲ့ သဘောထားပေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိုးသီးဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဋ္ဌေးနိုင်ကိုဖမ်းမြဲဖမ်းထားပါတယ်။
မင်း မလွှတ်ရင် ငါမာနယ်ပလော ကို ရောက်၊
ငါ့တပ်နှင့်တိုက်ပြီး ဋ္ဌေးနိုင် ကို ရအောင်ထုတ်ယူမယ် လို့
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်မာနယ်ပလော ကို ဆင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော့်ဆီကို ဖုံးတခုဝင်လာပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ချင်းမိုင်မြို့ က ဗိုလ်မှူးကြီး ထုံ လို့ခေါ်တဲ့ ထိုင်းထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲပါ။
သူက “သန်းဝင်း မင်းမဆင်းနဲ့ မင်းဆင်းရင် မယ်ဇရင်း ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ
ပလိပ်တွေ က မင်း ကိုစောင့်ပြီး အပြီးသတ်လိုက်လိမ့်မယ် လို့ပြောပါတယ်။
အဲ့တော့ ကျနော်က မေးတယ်။
ပလိပ်တွေက ကျနော့် ကို ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ ဆိုတော့
သူက မင်းကိုနယ်စပ်ကိုမရောက်အောင် ထိုင်းနယ်မြေထဲမှာ
အပြတ်ရှင်းဖို့ ထိုင်းပုလိပ် ကို ဘတ် တသောင်းပေးထားပြီးဖြစ်တယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော်အတော်အံ့သြပြီး အတော်လည်း ဒေါသဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျနော် မာနယ်ပလော ကို လုံခြုံရေးအရ မဆင်းဖြစ်တော့ပါဘူး။
နောက်တော့ မာနယ်ပလောကျခါနီးမှာ မိုးသီးဘက်ကရော၊ နိုင်အောင့်ဘက်ကပါ ဋ္ဌာနချုပ်ကိုရွေ့ပြောင်းရပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်အောင့်ဘက်မှာ ကိုနေဝင်းအောင်နဲ့ ကိုစိုးလင်းတို့ဟာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြပါတယ်။
မိုးသီး ဘက်မှ ဋ္ဌေးနိုင်ကတော့ အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ကျနော်ဟာ ဋ္ဌေးနိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတဲ့ သူတွေ အားလုံး ကို မေးမြန်းပါတယ်။
သူတို့ရှင်းပြတာက ဋ္ဌေးနိုင် ကိုစဖမ်းဖမ်းခြင်း၊ တဲအိမ်တခုမှာ လှောင်ပိတ်ထားတယ်။
နောက်နှစ်ပတ်အကြာမှာတော့ ဋ္ဌေးနိုင် ကို ဗဟိုရဲ့တဘက်ကမ်း သောင်ရင်းမြစ်ရဲ့
ဘာအစောင့်မှမထားပဲ ထမင်းပို့မှ လှေနှင့်သွားပို့ကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းအစောင့်စစ်သား နှစ်ယောက်ကိုမေးတော့ သူတို့က ကိုဋ္ဌေးနိုင် ကို ထားတာသိတ်ရက်စက်တယ်ဗျာ တဲ့။
သူ့အရပ် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မဆန့်တဲ့ ခြေထောက်ဆန့်လို့မရတဲ့ မြေကြွင်းထဲမှာထည့်ထားပြီး
ခြေထောက်ကလည်း အချိန်တိုင်းကွေးထားရတော့ တလလောက်အကြာမှာ ဋ္ဌေးနိုင်ဟာ
မတ်တပ်ရပ်လို့မရတော့ပဲ၊ ချိသွားတယ် တဲ့။
သူတို့ထမင်းသွားပို့တဲ့အချိန်မှာ တာဝန်ခံတယောက်ပါတယ် တဲ့။
သူတို့ ဋ္ဌေးနိုင် ကိုတွေ့တဲ့အခါ၊
ဋ္ဌေးနိုင် က “မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်တော့သတ်မလဲ၊ မြန်မြန်သတ်လိုက်ပါကွာ။
ငါမင်းတို့နှပ်စက်တဲ့ ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့လို့ပါလို့ နေ့တိုင်းတောင်းပန်ပြောတယ်လို့ ကျနော့ကိုရှင်းပြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဗဟိုဟာ စစ်ရေးအရရွှေ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ
မိုးသီးဟာ သူများတွေမရိပ်မိအောင် ဋ္ဌေးနိုင်လိုသရုပ်ဆောင်တဲ့တယောက်ကိုရွေးပြီး
မျက်နှာကိုဂုံနီအိပ်အုပ် သဏ္ဍန်လုပ်သရုပ်မှန်အောင်လိမ်ညာပြီး လှေပေါ်ကိုတရားခံခေါ်သွား တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ဖန်တီးပါတယ်။
အဲ့ဒီသရုပ်ဆောင်တဲ့သူက ကိုရဲလင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင် ကျနော့ ကို ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့သတ်ပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ။
မိုးသီး ဟာ အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ပါ။
ဒါကို သူမသတ်ပါဘူး လို့ ရှောင်ထွက်လို့မရပါဘူး။
မိုးသီးဟာ ၈၈၈၈ ခေါင်းဆောင်တယောက်မဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့က စစ်အဏာရူးပြီးပြည်သူကိုသတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဘီလူးတွေကို တိုက်နေတာပါ။
အခု မိုးသီးနှင့် နိုင်အောင်ဟာ အာဏာတခြမ်းပဲ့လေး ကို ရတာတောင်
ဒီလိုယုတ်ယုတ်မာမာ ရက်ရက်စက်စက် လူမဆန်စွာသတ်ဖြတ်ကြတဲ့
“မိုးသီး” ဒီလိုစွပ်စွဲချက်ဟာ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ တိုက်ခိုက်မှု လို့ မင်းကပြောတယ်။
မိုးသီး မင်းဘဝမှာ ဒီကိစ္စဟာ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာသတိပြုပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ မင်းလိုလူသတ်ကောင်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာနားလည်ပါ။
ဒီနေ့က စပြီး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊
မိုးသီးနဲ့နိုင်အောင်ဟာ စစ်ဘီလူးကောင်တွေလိုပဲ ဆိုးတဲ့လူသတ်တရားခံ၊
From : ..(သန်းဝင်း)
မြောက်ဦးတွင် ရခိုင်ဒေသခံများအလိုမရှိသော ဈေးအရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူ အမျိုးသားသစ္စာဖောက် တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေး
မြောက်ဦးမြို.နယ် မြို.မဈေးအတွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအနှစ်သက်သည့် လုပ်ရပ်အား လုပ်ဆောင်သည့်
ဈေးဝယ်ရန်လာရောက်သူ ကုတိုးဆိပ်ကျေးရွာ မှ အသက် ၂၀ အရွယ် မဦးမြသန်းအား စိုးရိမ် ရသော ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူနေခြင်း အတွက်ဝယ်ယူနေသော ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် ကုလားလူမျိုးများနှင့်ရခိုင်လူမျိုးများအကြား ပြဿနာ များထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်အတွက်ကုလားများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ပြီး ကုလားများထံသို့ အသွားအလာများ မပြုလုပ်ကြရန် (ကုလားများက လွယ်လျင် လွယ်သလိုသတ်ဖြတ်တတ်သဖြင့်) လူမှုရေး အဖွဲ. များမှ တားမြစ်ထားပြီး ယခုကဲ့သို. ကုလားများအတွက်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြုလုပ် ပြီးကု လားများနေ ထိုင်ရာ သို့ သွားရောက် နေသည့်အတွက် ကုလား-ရခိုင် ပဋိပက္ခများထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံ များမှ ပြောကြားသည်။
“အဓိက ကတော့ ပြဿနာတွေ မဖြစ်ပွားစေဖို.အတွက် အခုလို တားမြစ်ထား တာပါ…တားမြစ် ထားတဲ့ကြား ထဲကကို ဈေးရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နေကြ တဲ့အတွက် မကြာခဏ ရခိုင် လူမျိုးတွေ သတ်ဖြတ် ခံနေကြရ တယ်။ ဒီလိုသတ်ဖြတ်ခံရမှုတွေဖြစ်လာတော့ တစ်ဘက်က ဒေါသထွက်ပြီး ပြဿနာက ကြီးထွား လာနိုင် တယ်။ ဒါကြောင့်အခုလို တားဆီးထားတာပါ”ဟု မြောက်ဦးမြို့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး
ရဟန်းတော် များ အဖွဲ.မှ သံဃာတော် တပါးမှ မိန်.ကြားသည်။
ယခုဖမ်းဆီးရမိသည့် မဦးမြသန်း(ဘ)ဦးကျော်မြသောင်း ထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် ငွေကျပ် ၃၁၅၀၀၀ိ/ (သုံးသိန်း တစ်သောင်း ငါးထောင်ကျပ်)မှာ ကုလားများအတွက် ပစ္စည်းဝယ်ယူရန် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မဦးမြ သန်းမှ ၀န်ခံသည့်အတွက် ယင်းငွေများအား သက်ဆိုင်ရာမှတဆင့် ပြန်လည်ပေးအပ် သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း လည်း သိရှိရပါသည်။
အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည်မှာအဓိက မဟုတ်ဘဲ ကုလားများက သတ်ဖြတ် ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခြင်း များကြောင့် စိုးရိမ်သဖြင့် ပြဿနာမဖြစ် ရန် တားမြစ် ထားကြခြင်းဖြစ် သည်ဟု လည်းမြောက် ဦးမြို့ခံ တစ်ဦး က ပြောပါ သည်။
မန်း တံတားဦးတွင် မျက်မမြင်မိခင်အားလုပ်ကျွေးနေသူမိန်းကလေးအား မုဒိမ်းကျင့် လုယက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူအား သေဒဏ်ချမှတ်
မန္တလေး- သြဂုတ် ၄
မန္တလေးတံတားဦးတွင် မျက်မမြင်မိခင်အားလုပ်ကျွေးနေသူမိန်းကလေးအားမုဒိမ်းကျင့် လုယက် သတ်ဖြတ် ခဲ့သူအား ကျောက်ဆည်ခရိုင်တရားရုံးမှ သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ် မှာ အသက် ၇၀ကျော် မိခင်အား အကြော်ရောင်း ကျုံရာကျပန်းအလုပ်များဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြွေး မွေးနေသော မစန်းစန်းဝင်း(ခ)မဂွတိုအား တရားခံ တပ်ပြေး အောင်စိုး သည် ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လ ၈ရက် နေ့တွင် တံတားဦးမြို့မြင်းဝန်းသုသန်ထဲတွင် မုဒိမ်းကျင့်ကာ လူသတ်ခဲ့ပြီး အလောင်းမှ နားကပ်၊ လက်စွပ် တို့ အား ခိုးယူခဲ့ပြီး အဆိုပါတရားခံအား အဆိုပါနေ့တွင် မြို့သာမြို့အရှေ့ဘက် ရွာသစ်ကျေး ရွာတွင်ဖွင့် လှစ်ထား သည့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် သက်သေခံပစ္စည်းနှင့်အတူ နေ့တွင်းချင်းဖမ်းမိခဲ့သည်။
၄င်းမှာ တပ်မှ ထွက်ပြေးလာသော ဒုတပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး တွင် စစ်ဆေး မည်ကို မြို့ခံများက စိုးရိမ်သောကြောင့် အရပ်ဘက် တရားရုံးတွင်သာ စစ်ဆေးလိုကြောင်း စာတန်း များ၊ သေဒဏ်ပေးစေလိုသောစာတန်းများကို ကိုင်ဆိုင်ကာ တံတားဦးရဲစခန်းရှေ့တွင် မတ်လ အတွင်း က ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသေးကြောင်းမြို့ခံတစ်ဦးကပြောသည်။
သေဆုံး သူ မစန်းစန်းမြင့်(ခ)မဂွတိုမှာ အသက်၇၀ကျော် မျက်မမြင်မိခင်အား လုပ်ကျွေးနေပြီး အတန်း ပညာကောင်း စွာ မရှိခြင်း၊ စကားမပီခြင်း ခေါင်းရွက်ဈေးသည်အဖြစ် ဈေးလှည့်လည်ရောင်းချကာ ကြုံရာ ကျပန်း အလုပ် လုပ်ကိုင် ခြင်းတို့ကြောင့် စာနာစိတ်ဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြို့ခံတစ်ဦး ကဆိုသည်။
တံတားဦးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တရားခံအောင်စိုး(၂၅)နှစ်အား (ပ) ၁၄/၂၀၁၃ ပုဒ်မ ၃၉၂/၃၀၂/၃၇၆တို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး ကျောက်ဆည်ခရိုင်တရားရုံးတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အမှု ကြီးအမှတ် ၇/၂၀၁၃ ပုဒ်မ ၃၀၂/၁၁(ဂ)အရ သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 06, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ကျွန်တော်နိုင်ငံရေး မလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ကိုတော့ မျက်ခြည်မပြတ် လေ့လာပါတယ်။ “သူခိုး ဓားရိုးကမ်း၊ အဆိပ်ပင် ရေလောင်း၊ ဖွတ်ထွက်မှ တောင် ပို့မှန်းသိ” ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင် အသုံးမကျတာကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ စကားပုံတွေထဲမှာ ရောပြီး အပါမခံနိုင်ဘူး၊ ဒါနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ပဲလို့ ကျွန်တော် ခံယူတယ်။ အခုရက်ပိုင်း အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ သတင်းတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ သတင်း အခြေအမြစ် မတူပေမယ့် သတင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ တူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန် အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ Mr John Bercow က သြဂုတ်လ ၁ ရက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် စိန်ရတု ခန်းမမှာ- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတလောင်း ဖြစ်ခွင့် မပေးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းမှာ လှောင်ရယ်စရာ တစ်ခု ဖြစ်နေပါ လိမ့်မယ်တဲ့။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ် Mitch Mc Connell က ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်ကို တင်ပြချက်နဲ့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်မှာ- မြန်မာပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သူကို ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခွင့် ပေးဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန်နဲ့ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေဟာ အရမ်းကျဉ်းမြောင်းပြီး အဓိပ္ပါယ် ကင်းမဲ့ နေပါတယ်တဲ့။ ဒါအပြင် မြန်မာဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်တစ်ဆင့် တက်ချင်တယ်၊ အမေရိကန် နိုင်ငံနဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံချင် တယ် ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရပါ လိမ့်မယ်လို့ အပျော့ဆွဲနဲ့ ခြိမ်းခြောက် သွား ပါသေးတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ ဦးရွှေမန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေ မှာ ဖော်ပြမှု အနှစ်ချုပ်ဟာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် သွား မည့် သူဖြစ်ကြောင်း နှပ်ကြောင်းပေး ဖော်ပြ ထားကြတယ်။
ဒါ့အပြင် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ သတင်းသမားတွေရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ဒေါ်စု ဖြေကြားသွား တာက “၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို တစ်ကယ်ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် လိုစိတ်ရှိတယ် ဆိုရင် ရက် ၃၀ အတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သလို NLD ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီက တစ်ဆင့် ကြိုးပမ်းသွားမယ် ဒါ့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် ပြည်သူလူထုကို ချပြပြီး ရှင်းလင်းပွဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင် သွားမယ်” တဲ့။ နောက်တစ်ဖွဲ့ ကတော့ ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ညီလာခံရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မ ခံကြောင်း ဖက်ဒရယ်မူကို အခြေခံသည့် ဥပဒေသစ် ရေးဆွဲပြဌာန်းရန်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ချက် ပါဝင် နေကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
သတင်းတွေရဲ့ အဓိက ဆိုလိုချက် ဘာလဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဆိုတာ တွေ့ရတယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ချင်တာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တစ်ခြား အကြောင်း အချက်အလက်များ ရှိသော်လည်း အဓိက အနေဖြင့် ဒေါ်စု သမ္မတ မဖြစ် ဖြစ်အောင် ကြိုးစား တင်မြှောက်ရေး ဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရဲ့ တစ်ချိန်တည်း အချိန်ကိုက် ထုတ်ဖော်/ တွန်း အားပေးခြင်း တွေကို ထပ်မံ ခြုကြည့်မယ်ဆိုရင် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ချက်များလားဟု မြင်မိပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်လို ညှိနှိုင်းကြတာလဲ ဇာတ်ညွှန်းရေး ဆရာရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို ဒါရိုက်တာက လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပုံဖော်စီစဉ် ညွှန်ကြားသလို မင်းသမီး ကိုလည်း လိုက်ပါစေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်လောကမှာ နာမည်ကြီး မင်းသမီး အချို့၏ ထုံးစံအတိုင်း ဒါရိုက်တာက မင်းသမီး အလိုကျ လိုက်ကာ ဇာတ်ညွှန်းကိုပါ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေး ရတာလား။
ဘယ်သူ သမ္မတဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီး အေးချမ်းသာယာပြီး ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဖို့က အဓိက မဟုတ်ပါလား။ နိုင်ငံကြီးအချို့က တစ်ဦး တစ်ယောက်ကို သမ္မတဖြစ်အောင် ဖိအားပေးမှု တွေက Diplomacy မဆန်ပါ။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတစ်ခုဟာ တစ်ချိန်က ဗြိတိသျှ၊ ဂျပန်၊ ပြင်သစ် တပ်ဖွဲ့တွေ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှု အောက်က လွတ်ကင်းကာ သူ့ကျွန်ဘဝ မရောက်ခဲ့ဘူး။ အခုလည်း သူတို့နိုင်ငံဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံထက် အများကြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နေပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် အထင်ကြီး စရာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အစိုးရဟာ ထိုင်ဆိုရင်ထိုင်၊ ထဆိုရင်ထ၊ စားဆိုရင်စား အမိန့်နာခံ နေရတဲ့ အခြေအနေ ကိုလည်း သတိပြု မိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အစိုးရနှင့် နိုင်ငံအကြီးအကဲ ပြောင်းလဲမှုများ အကြား စစ်တပ်က မကြာခဏ ကြားဝင်ခြင်းများနဲ့ လည်ပတ်နေတယ်။ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ဖုံးလွှမ်းသွားပြီး သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများဟာ ဝင်ငွေတစ်ခု အဖြစ် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကို ပြစားတဲ့ အဆင့်သာ ရှိတော့ကာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ နှုတ်ဖျားမှာ အပန်းဖြေရာ နိုင်ငံကြီး အဖြစ် အဓိက လူသိများ ကျော်ကြားလျက် ရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကြိုးဆွဲခံ အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံသားများ မဖြစ်ချင်ပါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေရဲ့ သမ္မတ အရည်အချင်းမှာ မိမိကိုယ်တိုင်သော် လည်းကောင်း တရားဝင် ဇနီး/ ခင်ပွန်း၊ သမီး/သား တစ်ဦးဦးသော် လည်းကောင်း ထိုသားသမီး၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းသော် လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားသား ခံယူထား သူများ မဖြစ်စေရ။ ထိုသူများသည် နိုင်ငံခြား အစိုးရ၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သူသော်လည်းကောင်း၊ တိုင်း တစ်ပါး၏ နိုင်ငံသား သော်လည်းကောင်း ခံစားရသော အခွင့်အရေးများနှင့် ကျေးဇူး ခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခွင့် ရှိသူများ မဖြစ်စေရလို့ ထည့်သွင်း ထားချက်သည် များစွာ အဓိကကျပါသည်။ ဒါကြောင့် ဗြိတိန်အောက် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ Mr John Bercow ပြောသလို ဒေါ်စု သမ္မတ မဖြစ်ရင် သူတို့အတွက် လှောင်ရယ်စရာ တစ်ခုဖြစ်မယ် ဆိုတာ လုပ်ကြံပြောဆိုတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဖြစ်စေ ချင်သူ မဖြစ်ခဲ့မူ သူတို့ အတွက် ရယ်စရာ မဟုတ် ငိုစရာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် အပိုင်းများ ရှိမယ်ဆိုတာ လက်ခံပါသည်။ ဥပဒေ လမ်းကြောင်း အတိုင်းသာ သွားကြရပါ လိမ့်မည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက် အတွက်/ ဖိအားပေး ခံရမှုတွေ အတွက် ရည်ရွယ် ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုလုပ် သင့်ပါ။ ဒုသမ္မတလောင်း အရည်အချင်းများသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဒေါ်စု သမ္မတ မဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲ ထားသည်ဟု မထင်ပါ။ မိမိနိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအပေါ် သစ္စာ စောင့်သိမှုကို အခြေခံစေပြီး တိုင်းတစ်ပါးကို အထင်ကြီးကာ မိမိနိုင်ငံကို ပစ်ပယ်၊ အမျိုးဂုဏ်ကို မစောင့်ဘဲ တိုင်းတစ်ပါးသားနှင့် အိမ်ထောင်သားမွေး၊ မိမိ မြန်မာ့မျိုးဆက် (တရားဝင်) မရှိသူများ အတွက်တော့ အတားအဆီး တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီးသည် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ် ဘုရားများ၏ အငွေ့ အသက်များနှင့် လွှမ်းခြုံရာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားသော နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ပြီး ဝံသာနု ရက္ခိတဆိုတဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ထိန်းကြ သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အနေဖြင့် ခြုံငုံကြည့်ပါက ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင် ယုံကြည် ကိုးကွယ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ တရားတော်များနှင့် အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး နေထိုင်ကြခြင်းကြောင့် တရားကို နတ်စောင့်ဆိုသလို နိုင်ငံတော်ကြီး ကိုလည်း နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များ စောင့်ရှောက်နေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော လိုလားသည် ဖြစ်စေ၊ မလိုလားသည် ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်သူကို ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်ကြ ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ရယ်စရာ ရှိလည်း ရယ်နိုင်ပါတယ်၊ ငိုလိုပါက ငိုနိုင်ပါတယ်၊ အစိုးရသစ်ရဲ့ ယန္တရား လည်ပတ်မှုကိုတော့ အနှောင့် အယှက် မဖြစ်စေလိုပါကြောင်း မကူညီချင်နေပါ မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပါရစေ။
သက်ဆုံးတိုင် အတူ နေထိုင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ဆော်ဒီ အဘိုးအဘွား စုံတွဲ အတူတကွ ကွယ်လွန်
ရီယက်ဒ် သြဂုတ် ၄
ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံမှ အဘိုးအဘွား စုံတွဲတစ်တွဲသည် ၎င်းတို့ လက်ထပ် ထိမ်းမြားစဉ် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ကျော်ခန့်က သက်ဆုံးတိုင် အတူတကွ ပေါင်းသင်း နေထိုင်၍ အတူတကွ သေဆုံးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည့် အတိုင်း ယခု ရက်သတ္တပတ်က အတူတကွ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၁ဝဝ ခန့်ရှိပြီဖြစ်သော ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်က အနီးအနားရှိ ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းသို့ သွားရောက် စဉ် လမ်းခရီး၌ လဲကျသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် မကြာမီ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ရင်ကွဲနာ ကျ၍ သေဆုံး ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူမှာ အသက် ၉ဝ ခန့် အရွယ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့ စုံတွဲတွင် သားသမီးနှင့် မြေး စုစုပေါင်း ၂ဝဝ ကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ဂျာဇန်ပြည်နယ် အဘူလ် လာဟပ် ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အဘိုးအဘွား စုံတွဲက မိမိတို့ နှစ်ဦးသေတော့မည်ဟု ခံစားရကြောင်းနှင့် အတူတကွ သေဆုံးမည် ဟုလည်း မျှော်မှန်း ထားကြောင်း ၎င်းတို့မကွယ် လွန်မီ အိမ်သို့ အလည်အပတ်ရောက် ရှိလာသော မြေးဖြစ် သူအား ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂါလီအရေး တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အင်ဒိုဘုရားကျောင်းကို ဗုံးဖောက်ခွဲဟုဆို
Posted by drmyochit Tuesday, August 06, 2013, under သတင်းများ | No comments
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မြို့တော်ဂျာကာတာရှိ ဗုဒ္ဓဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင်း ဩဂုတ်လ ၅ ရက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ပေါက်ကွဲမှုတွင် “ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်” ဟူသော စာတန်းအား တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု AFP သတင်းဌာန၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု နေထိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ဘာသာမတူသည့် အုပ်စုနှစ်ခုအကြား ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်နေစဉ် မွတ်ဆလင်အများစုနေထိုင်သည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်း ဖောက်ခွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရာနှင့်ချီသော ဘုရားဖူးများ ဖူးမျှော်နေသည့် Ekayana ဗုဒ္ဓကျောင်းတော်အတွင်းတွင် သံအပိုင်းအစများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဖျက်အားနည်းသည့် ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ဘုရားဖူးတစ်ဦးမှာ ခြေထောက်နှင့် လက်များတွင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျက်စီးမှု အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီး ဖောက်ခွဲရန်ပြင်ဆင်ထားသည့် ဒုတိယဗုံးတစ်လုံးမှာမူ မီးခိုးများသာ ထွက်ခဲ့ပြီး ပေါက်ကွဲမှုမရှိခဲ့ဟု ရဲများက ဆိုသည်။
CCTV ကင်မရာမှတ်တမ်းများအရ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ ဘုရားကျောင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ဗုံးများထည့်ထားသည့် အစိမ်းရောင်ပုံးနှစ်ပုံးကို တံခါးနှစ်ခုအနီး ထားရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသည်ဟု ဘုရားကျောင်း တာဝန်ခံ Ponijan Liaw မှ AFP သို့ ပြောသည်။ ယင်းသို့ထားရှိပြီး မရှေးမနှောင်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း Ponijan Liaw က ပြောသည်။
အထုပ်တစ်ထုပ်တွင်မူ “ကျွန်တော်တို့က ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ” ဟု တွေ့ရှိရပြီး ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအား ရဲများလက်သို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း Liaw က ပြောသည်။
အင်ဒိုနီးရှား အာဏာပိုင်များကမူ တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းအား ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိသည်ဆိုသည်အား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Ronny Sompie မှဆိုသည်။
ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာ “အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ဆွပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာရေးဝန်ကြီး Suryadharma Ali က ပြောသည်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်ကို သက်ရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ သူတို့အကြားမှာရှိတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာ လက်ရှိအချိန်ထိကောင်းနေဆဲပါ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်းက သူတို့တွေအကြားမှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ မဖြစ်ပွားသေးပါဘူး” ဟုလည်း သာသနာရေးဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
ယခုလာမည့်လတွင် အစ်ပွဲတော်ဖြင့် အဆုံးသတ်မည့် မွတ်စလင်တို့၏ အထွတ်အမြတ်လ တစ်ခုဖြစ်သော “ဥပုသ်လ၏ ငြိမ်းချမ်းမှု” အား ဖျက်ဆီးလိုက်သည့် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူအား လုံခြုံရေးဝန်ကြီး Djoko Suyanto မှ ရှုတ်ချသည်။
“ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ချက်ချင်း လိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့အတွက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အမိန့်ပေးပြီးပါပြီ” ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုနှစ်မေလတွင် ဘင်္ဂါလီအရေးကိစ္စအပေါ်တွင် အမျက်ထွက်နေသည့် အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်များမှ ဂျာကာတာရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကိုလည်း အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း ခြောက်ခုမျှ ကြာမြင့်ခဲ့သည့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘာသာမတူသည့် အုပ်စုနှစ်ခုအကြား ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိနေသည်။
ဇူလိုင်လ ၇ ရက်ကလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂယာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သေးသည်။
မဇ္ဈိမ၊ AFP |
Posted by drmyochit Tuesday, August 06, 2013, under ဓါတ်ပုံ Album | No comments
အမျိုးသမီးသုံးဦး၏ ရင်သားများကို မဖွယ်မရာ ကိုင်တွယ်မှုဖြင့် အရေးယူ
သေမင်းတမန် တောင်တွင် ထူးဆန်းသောရောဂါကြောင့် လူ ၃၀၀ ခန့် သေဆုံး
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး သပိတ်ကျင်းမြို့ နယ်တွင်ရှိသော သေမင်းတမန် တောင် မီးလန်းသတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်သားများအနက် လုပ်သား ၃ဝဝသည် ပုံစံတူရောဂါတစ်မျိုး ဖြင့် သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် အလုပ်သမားမိသား စုများက ရန်ကုန်တိုင်းမ်နေ့စဉ် သတင်းစာသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုက်သည်။
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် သပိတ်ကျင်း မြို့နယ် ချောင်းကြီးကျေးရွာရှိ ဒေသအခေါ် 'မီးလန်း'ဆိုသည့် ရွှေသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင် တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သည့် ချောင်းကြီးကျေးရွာမှ အလုပ်သမား များတွင် အဆုတ်ကင်ဆာကဲ့သို့ အသက်ရှူ လမ်း ကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်မျိုးကြောင့် ယင်းသတ္တု မိုင်းတွင်းစတင်သည့် ၁၉၉၅ခုနှစ် မှ ယနေ့အချိန်အထိ အလုပ်သမား ပေါင်း၃ဝဝခန့်သည် ပုံစံတူရောဂါ တစ်မျိုးတည်းဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရ ကြောင်း ချောင်းကြီးကျေးရွာ ဒေသခံတို့၏ ပြောကြား မှုများ အရ သိရသည်။
''သားသုံးဦးစလုံး ဒီလုပ်ငန်း ခွင်မှာ ဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ငွေလဲ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါကို အဲဒီငွေတွေ နဲ့ ပြန်ကုတာတောင် မရတော့ ဘူး။ သားတွေကို ဒီလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်စေခဲ့တာက အဒေါ့်ကို အခုလို အထီး ကျန် ဆန်စေခဲ့ တယ်'' ဟု တီဘီကဲ့သို့ လက္ခဏာတူညီ သည့်ရောဂါဖြင့် သားသုံးဦးစလုံး ရောဂါတူ၊ ပုံစံတူ၊ တစ်နှစ်ခြား ပြီး သေဆုံးခဲ့ရပုံကို မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ရွှေဥက ပြောသည်။
အဆိုပါ သတ္တုမိုင်းတွင် သတ္တုတူးဖော်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း မျိုးစုံရှိပြီး ယခုကဲ့သို့သေဆုံးခဲ့သည့် အလုပ်သမားများသည် သတ္တုကို လေမှုတ်စက်(လေဂမ်း)ဖြင့်မှုတ် သည့်လုပ်ငန်းခွင်မှ အလုပ်သမား များဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ပြီးနောက် သုံးနှစ် မှ ငါးနှစ် အတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားပြီး သေဆုံးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကဲ့ သို့ဖြစ်မည်ကို အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် ကြိုတင်သိရှိနေသော် လည်း မိသားစုဝင်ငွေလိုအပ်ချက် အရ ကျေးရွာသားများက လုပ်ကိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် တွင် ယင်းကဲ့သို့ရောဂါဖြစ်နေသူ ကို 'ဂမ်း'ရောဂါသမားဟု အမည် တွင်ခေါ်ယူနေသည်အထိ အခြေ အနေဆိုးရွားလျက်ရှိကြောင်း ချောင်းကြီးကျေးရွာ ဒေသခံများ ၏ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ ချောင်းကြီး ကျေးရွာသား ဦးလှငွေ က ''ဂမ်းရောဂါဖြစ်တဲ့သူ တိုင်းသေကြတာပဲ။ အခုဆိုရင် ကျေးရွာကလူတွေက မလုပ်သ လောက်ရှားနေပြီ။ ရှိတော့ရှိသေး တယ်''ဟုပြောသည်။ ဒေါ်ရွှေဥက''သားတွေနဲ့အ တူ အလုပ်ဆင်းခဲ့ကြတဲ့ သူငယ် ချင်းခြောက် ဦးလဲ ဒီရောဂါနဲ့ပဲ သေ ကုန်ပြီ''ဟု ဆက်လက်ပြော သည်။
မကြာသေး မီရက်ပိုင်းများ အတွင်းက ယင်းရောဂါဖြင့်သေ ဆုံးခဲ့သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးရှိခဲ့ ပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး သေဆုံး မည့်အချိန်ကို စောင့်နေသူများ လည်း ကျေးရွာတွင်ရှိနေကြောင်း ချောင်းကြီးရွာသားများက ပြော သည်။ မီးလန်း သတ္တု တွင်း (ဒေသ အခေါ် သေမင်းတမန်တောင်)ကို ၁၉၉၅ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှ စတင်တူး ဖော်နေခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုခန့်က ပြောင်းလဲလုပ် ကိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာသား များကပြောသည်။
မြန်မာလူမျိုးများ ပြည်ပခရီးစဉ် ထွက်ခွာမှု တစ်နှစ်လျှင် သုံးသိန်းရှစ်သောင်းကျော်အထိ ရှိလာ
မြန်မာလူမျိုးများ ပြည်ပခရီးစဉ် ထွက်ခွာမှုသည် တစ်နှစ်လျှင် ဦးရေသုံးသိန်းရှစ်သောင်းကျော်အထိ ရောက်ရှိ လာကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ဇော် ၀င်းက ပြောကြားသည်။
သြဂုတ် ၃ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၌ ပြုလုပ်သည့် ပြည်ပခရီးစဉ် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆွေးနွေး ပွဲ၌ ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"တစ်ရက်တစ်ရက်ကို ပြည်ပကို ထွက်နေတာက ၂၀၁၁ ကဆို ၉၀၀ ကျော်လောက် ရှိတယ်။ ၂၀၁၂ မှာဆို ၁၀၀၀ လောက် ရှိတယ်။ ဒါနေ့စဉ် သွားနေတာပေါ့။ total ပြောရင်တော့ တစ်နှစ်ကို သုံးသိန်းရှစ်သောင်း ရှိတာပေါ့။ လေဆိပ်က ထွက်တာနဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် inbound (ပြည်ဝင်ခရီးစဉ်)နဲ့ outbound (ပြည်ပ ခရီးစဉ်)သည် သိပ်မကွာပါဘူး။ မတိမ်းမယိမ်းလောက်ထိ ရှိလာပါတယ်" ဟု ဦးအောင်ဇော်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာလူမျိုးများ ပြည်ပခရီးစဉ် ထွက်ခွာမှုသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းတွင် စတင်တွင်ကျယ်လာပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၌ ထွက်ခွာမှု ပိုများလာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပသို့ ခရီးစဉ်ထွက်ခွာမှုတွင် သွားရောက်မှု အများဆုံးနိုင်ငံများမှာ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်-မကာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ကိုရီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်တို့ ဖြစ်သည်။
မြန်မာခရီးသွားများ ပြည်ပသို့ ခရီးထွက်ခွာရာတွင် အလည်အပတ် အားလပ်ရက် အပန်းဖြေခြင်း၊ ဟန်းနီးမွန်း ခရီးစဉ်၊ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ စွန့်စားခရီးသွားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကုသ စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အခြားရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သွားရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု Ayarwaddy Legend ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာဦးဘုန်းပိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
"ခရီးသွားရာမှာ လေကြောင်း၊ နယ်စပ်ကနေ ကုန်းကြောင်းလမ်းတို့နဲ့ သွားကြပါတယ်" ဟု ဦးဘုန်းပိုင်ဦးက ဆိုသည်။
လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတို့ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်များမှ သွားလာကြပြီး နယ်စပ်လမ်းကြောင်းများတွင် ထားဝယ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြ၀တီမှထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာချီလိတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မူဆယ်မှ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကော့သောင်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာချီလိတ်မှ လာအိုနိုင်ငံ၊ တမူးမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သို့ သွားလာကြသည်ဟု သိရသည်။
"မြန်မာတွေ ခရီးသွားတာ တော်တော်များလာတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့လည်း သွားကြတယ်။ ကျောက်မျက်လိုမျိုး ပြပွဲတွေ သွားကြတယ်။ သင်တန်းတွေ၊ အပန်းဖြေ ခရီးတွေလည်း သွားကြတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အပျော်စီးသင်္ဘောလို ခရီးတွေလည်း သွားဖို့ရှိလာတယ်" ဟု Myanmar Voyages ခရီးသွား ကုမ္ပဏီမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးသက်လွင်တိုးက ပြောပြသည်။
ယင်းသို့ မြန်မာလူမျိုးများ ပြည်ပခရီးစဉ် သွားရောက်မှု များပြားလာသည်နှင့်အမျှ လေကြောင်းလိုင်းများမှ ခရီးစဉ်ဒေသသစ်များ တိုးချဲ့ရေး၊ ခရီးစဉ် ဒေသများအကြောင်း ဖလှယ်၍ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် သင်တန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲ အချို့အား ကူညီခြင်း စသည်တို့ လိုအပ်လာမည် ဖြစ်သည်ဟု အကြံပြု ဆွေးနွေးမှုများအရ သိရသည်။
ငွေ ၅၀၀ အတွက် အချင်းများရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်
ပဲခူးတိုင်း (အနောက်ပိုင်း) ဒေသကြီး ရွှေတောင်မြို့နယ် မီးတောင်အုပ်စု၊ ဝါးလည်ရွာတွင် အလုပ် လုပ်ခြင်းဖြင့် ပေးဆပ် မည်ဟုဆိုကာ ချေးယူ ထားသောငွေ ၅၀၀ ကျပ်အတွက် အချင်းများရာမှ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း ရွှေတောင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
တူဖြစ်သူ ကိုသန်းသူမောင်ထံက ချေးယူထားသော ငွေ ၅၀၀ ကျပ်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရန် ဦးဝင်းမြင့်နိုင် ကို သွားရောက်ခေါ်စဉ်တွင် ဦးဝင်းမြင့်နိုင် နေမကောင်း ဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း၊ နောက် တစ်နေ့ တွင် တူဝရီးနှစ်ယောက် အတူအရက်သောက် စကားများရာမှ ဦးဝင်းမြင့်နိုင် သေဆုံးခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ၏ နေအိမ်ရှေ့ တွင် တူဖြစ်သူက တုတ်ဖြင့် ရိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာ အနီးရှိ ရွာခံများ၏ ပြောဆိုချက် အရ သိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့က တူဝရီးဖြစ်သူ ဦးဝင်းမြင့်နိုင်နှင့် ကိုသန်းသူမောင်တို့ အရက်အတူ သောက်ရာမှ စကားများ ခဲ့ပြီး ကိုသန်းသူမောင်က ဝါးတုတ်ဖြင့်တစ်ချက် ရိုက်ခဲ့ရာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်သဖြင့် ပြည်မြို့ ပြည် သူ့ဆေး ရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါဒဏ်ရာဖြင့် သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့တွင် ဦးဝင်းမြင့်နိုင် သေဆုံး သွား ခဲ့ကြောင်း ရွှေတောင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တပ်ကြပ်ကြီး ဦးအောင်မြင့်ဌေးက ပြောကြားသည်။
ဦးဝင်းမြင့်နိုင် သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပ/၁၈၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၂၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင် ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် ပြောင်းလဲ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရွှေတောင်မြို့နယ် ရဲစခန်းထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ရဲလေးဦးကို လူသတ်မှုဖြင့် အဆိုပါရဲစခန်း၏ စခန်းမှူး အုန်းကျော်က တောင်ငူခရိုင် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားရာ သြဂုတ် ၂ ရက်တွင် ယင်းအမှုကို တရားသူကြီးက စွဲချက် တင်လိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက အရက်သေစာသောက်စားထားသည့် ဖြူးမြို့မှ လူငယ် တစ်ဦးကို ရဲလေးဦးကရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်ထိန်းသိမ်းစဉ် သေဆုံးသွားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့ကို စွပ်စွဲ ကာ ယခုလိုတရား စွဲဆို ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရဲလေးဦးက စခန်းတွင်ခေါ်ဆောင် ထိန်းသိမ်းစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့သူမှာ အသက် ၂၄ နှစ် အရွယ် ကိုလင်းလင်းထက် ဆိုသူဖြစ်ပြီး သူသည် သေဆုံးချိန်အထိပြစ်မှုကြောင်းအရ တစ်စုံတစ်ရာ အမှုဖွင့်ခံထားရခြင်းပင် မရှိသေးကြောင်းသေဆုံးသူ၏ အမဖြစ်သူက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ကိုလင်းလင်းထက် သေဆုံးသည့်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲခံရသည့် ရဲလေးဦးကို ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ ကနဦး အရေးယူခဲ့ရာ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးက ထောင်တစ်နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ကျန် ဒုရဲအုပ်တစ်ဦး၊ တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးနှင့် ရဲတပ်သားတစ်ဦးတို့ကိုမူ ရာထူးလျှော့ချသည့် ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ကာယကံရှင် မိသားစုထံမှ စုံစမ်းရရှိသည်။
ထိုသို့ ရဲဥပေဒအရ အရေးယူပြီးသည့်အပြင် အရပ်ဖက်တရားရုံး၌ လူသတ်မှုဖြင့် စခန်းမှူးက ထပ်မံ တရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး တရားသူကြီး သြဂုတ် ၂ ရက်တွင် စွဲချက်တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် တောင်ငူခရိုင်တရားသူကြီး၏ စွဲချက်ကို ရဲများက “အပြစ်မရှိပါဘူး၊ သက်သေရှိပါတယ်” ဟု ခုခံခဲ့ကြောင်းတရားခွင်၌ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သော သေဆုံးသူ၏ အမဖြစ်သူ မမြင့်ခက်ခက်မွန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခုအမှုကို သြဂုတ် ၁၄ ရက်တွင် ထပ်မံစစ်ဆေးရန် တရားသူကြီးက ချိန်းဆိုလိုက်ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ ဖခင်ဦးလှမြင့်က ပြောသည်။
လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသော ဖြူးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ရဲများမှာ ဒုရဲအုပ် သူရိန်စန်း၊ ဒုရဲအုပ် ၀င်းတင့်၊ တပ်ကြပ်ကြီး ဖိုးစီ၊ တပ်သား မင်းကိုလတ်တို့ဖြစ်ကြကြောင်း သေဆုံးသူ ကိုလင်းလင်းထက်၏ မိသားစုဝင်များက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
သြဂုတ်လ ဒုတိယအပတ်တွင် ကြယ်မိုးရွာမှု ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်မည်
ကြယ်မိုးရွာမှု ဖြစ်စဉ် (သို့) ဥက္ကာပျံ အစုအခဲငယ်များ ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ပြာအဖြစ် ကျရောက်ခြင်း ဖြစ်စဉ် သည် သြဂုတ်လ ဒုတိယအပတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ နက္ခတ်သိပ္ပံအဖွဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိ ချုပ် ဦးဇေယျာကိုက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကြယ်မိုးရွာမှု ဖြစ်စဉ်သည် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး ခြောက်ကြိမ်မှ ရှစ်ကြိမ်အထိ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး ယခု သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်မည့် ဖြစ်စဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ မြင်တွေ့နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သြ ဂုတ် ၁၂ ရက် ည ၁၀ နာရီကျော် အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက် အရပ်တွင် အလင်းရောင် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
''ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့က လကွယ်နေ့ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကောင်းကင်မှာ အလင်းရောင် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေ မယ်။ မိုးမရွာဘဲ ရာသီဥတု ကောင်းရင် မြင်ရမယ်။ ည ၁၀ နာရီကျော်ကနေ နံနက်အာရုံတက်ချိန်အထိ မြင်တွေ့နိုင် တယ်'' ဟု ဦးဇေယျာကိုက ဆိုသည်။
ကြယ်မိုးရွာခြင်းများကို ဇန်န၀ါ ရီ ၂ ရက်မှ ၃ ရက်၊ ဧပြီ ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက်၊ မေ ၄ ရက်မှ ၆ ရက်၊ သြဂုတ် ၁၀ ရက်မှ ၁၃ ရက်၊ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၈ ရက်မှ ၂၃ ရက်၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်၊ ဒီဇင် ဘာ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ရက်များအကြား ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း သိရသည်။
''ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ မရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကြီးမားတဲ့ ဥက္ကာပျံခဲ၊ အရှိန်ပြင်း တဲ့ ဥက္ကာပျံခဲတွေ ကမ္ဘာပေါ်ကို ကျရောက်နိုင်တယ်'' ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ခရိုင် ၃ ခုတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လ...
သက်ဆုံးတိုင် အတူ နေထိုင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ဆော်...
ဘင်္ဂါလီအရေး တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အင်ဒိုဘုရားကျောင်း...
အမျိုးသမီးသုံးဦး၏ ရင်သားများကို မဖွယ်မရာ ကိုင်တွယ်...
သေမင်းတမန် တောင်တွင် ထူးဆန်းသောရောဂါကြောင့် လူ ၃၀၀...
သြဂုတ်လ ဒုတိယအပတ်တွင် ကြယ်မိုးရွာမှု ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေ...